Casio Classic AMW720-1AV Wrist Watch - Trivoshop pa $ 120.00 chete kubva kuTrivoshop
musha chishongo Casio Classic AMW720-1AV Wrist Kutarisa - Trivoshop
Casio Classic AMW720-1AV Wrist Kutarisa - Trivoshop
Kana iwe uchida fashoni kumberi dhizaini uye ramangwana kumberi basa re digital wachi kubva kuCasio inokutora iwe nechivimbo mune yako inotevera ushingi. Iyi wachi inoshanda uye inonakidza kupfeka. Dhizaini yakagadzika uye yakasarudzika maficha eiyi wachi inokuisa parutivi nepakeji.
Iyo yechirume yakatenderera yakaita dial inotaridzika zvakanaka uye inoita kuti iwe uverenge iyo nguva zviri nyore
Inokwanisa kuratidza nguva mune zvese izvi; analoginen uye dijitari fomati
Mvura inodzivirira inosvika 164.04 ft, saka inokodzera kushambira, kushambira, snorkeling, kufamba nechikepe uye mitambo yemvura